10 सामाजिक मिडिया रणनीतिहरू जुन साझेदारी र रूपान्तरणहरू बढावा दिन्छन् Martech Zone
लोकप्रिय विश्वासको विपरित, सोशल मिडिया मार्केटिंग भनेको तपाईका पोष्टहरू अनलाइन हुदाँ सुसंगत हुनु भन्दा बढी हुन्छ। तपाइँले रचनात्मक र प्रभावशाली सामग्रीको साथ आउनुपर्दछ - यस्तो चीज जसले मानिसहरूलाई कार्य गर्न चाहन्छ। यो सरल हुन सक्छ को रूप मा कसैले तपाइँको पोष्ट साझा या रूपान्तरण शुरू गर्न को लागी हुन सक्छ। केहि मनपर्दो र टिप्पणीहरू पर्याप्त छैनन्। अवश्य पनि, लक्ष्य भनेको भाइरल हुनु हो तर त्यो प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ?
यस लेखमा, हामी सामाजिक मिडिया रणनीतिहरूमा तौल गर्दछौं जुन तपाईंको सामाजिक शेयर र रूपान्तरण विस्तार गर्दछ। हामी कसरी व्यक्तिहरूलाई हाम्रो पोष्टहरूको बारेमा केहि गर्न लगाउँदछौं? तिनीहरूलाई के पोष्ट साझा गर्न को लागी बनाउछ? हामी तपाईंको लागि केहि उपयोगी सल्लाहहरू तल सूचीबद्ध गर्दैछौं।
सर्वेक्षणहरू सञ्चालन गर्नुहोस्
मानिसहरु लाई आफ्नो रायहरु अरु मा थोपेको प्राकृतिक प्रवृत्ति छ। जबकि यो कष्टप्रद देखिन्छ, तपाईं यसलाई आफ्नो लाभको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सर्वेक्षणहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ! सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मले सर्वेक्षण वा सर्वेक्षण सुविधा प्रदान गर्दछ त्यसैले यसको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं केहि साधारण को बारे मा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ के रूप मा राम्रो छुट्टी स्थल के हो, के पिउनु पर्छ, वा यदि उनीहरू लाग्छ कि तपाईं आफ्नो कपाल काट्नु पर्छ वा छैन। र colors्गहरू, उनीहरूले के गतिविधिहरू गर्छन्, वा उनीहरू के सेवाहरू चाहन्छन् भनेर सोधेर उनीहरूको प्राथमिकताहरूको बारेमा बढि जान्न तपाई यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वेक्षणको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि तिनीहरू अनियमित प्रश्नहरूको रूपमा आउँदछन् त्यसैले मानिसहरू आफ्ना दुई सेन्ट दिन डराउँदैनन्।
उनीहरूलाई प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि सोध्नुहोस्
धेरै जसो ब्लगरहरु प्रतियोगिताहरु शुरू गरेर अनुयायीहरु प्राप्त गरे। यसले तपाइँको अनलाइन उपस्थिति लाई बढावा दिन्छ, र तपाइँ एक पल मा रूपान्तरण पाउनुहुन्छ किनकि तपाइँको पेज आगन्तुकहरुलाई केहि गर्न को लागी आवश्यक छ ताकि उनीहरु प्रतियोगिता को हिस्सा बन्न सक्छन्। तपाइँ यो अवसर को उपयोग गर्न को लागी तपाइँको पृष्ठ को प्रचार गर्न को लागी र न केवल लाइक र शेयरहरु लाई तर रूपान्तरण दरहरु लाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
Q&A सत्र सुरू गर्नुहोस्
यदि तपाइँ यात्रा वा अनियमित रूपमा तपाइँको पोस्ट अतीत स्क्रोल गर्ने मान्छे को प्रोफाइल को बारे मा तपाइँको ज्ञान गहिरो गर्न चाहानुहुन्छ, एक प्रश्न र उत्तर सत्र होल्ड गर्नुहोस्। यो काम गर्दछ किनकि उनीहरु यसलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, मान्छेहरु लाई वास्तव मा यो मन पर्छ जब कोहि आफ्नो राय को लागी सोध्छन्। एक निश्चित आवश्यकता पूरा हुन्छ जब कोहि उनीहरुलाई स्पष्टीकरण को लागी सोध्छन्। यो तपाइँको लागी तपाइँको नेटवर्क मा मानिसहरु लाई बुझ्न को लागी एक रणनीति हो र तपाइँको भविष्य को पोस्ट प्रवृत्ति लाई मद्दत गर्ने रणनीतिहरु संग आउन को लागी एक उत्कृष्ट तरीका हो।
ती छविहरू चालु पाउनुहुन्छ?
यसको मतलब, हामी भिडियोहरू अपलोड गर्छौं। एउटा छवि महान छ, तर हामी यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं कि अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको विशाल प्रतिशतले भिडियो सामग्रीमा अधिक रुचि राख्छ। सामाजिक मिडिया परीक्षकद्वारा गरिएको एक अध्ययन अनुसार हामी सबैलाई फेसबुकको रूपमा थाहा छ, प्रयोगकर्ताहरूले एक सय मिलियन घन्टा उपभोग गर्दछन् भिडियो हेर्दै प्रत्येक दिन। यसको फाइदा लिनुहोस् र अधिक भिडियोहरू अपलोड गरेर तपाईंको रूपान्तरण दर बढाउनुहोस्!
प्राय: पोस्ट गर्नुहोस्
यदि तपाईं हप्तामा एक पटक मात्र पोष्ट गर्नुभयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन कि तपाईंको अनलाइन उपस्थिति कम छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्दछ यो हो: तपाईंको सोशल मिडिया स engage्लग्नता तपाईंको पोष्टको फ्रिक्वेन्सीमा सिधा जडित छ। अब, फ्रिक्वेन्सी तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा निर्भर गर्दछ। यदि यो फेसबुक हो भने, तपाई दिन मा कम्तिमा एक पटक पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ तर यदि तपाई ट्विटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो उपस्थिति अनलाइन राख्न दुई घण्टामा कम्तिमा एक पटक पोष्ट गर्नु पर्ने हुन्छ।
इन्फोग्राफिक्स अपलोड गर्नुहोस्
सबै कुरा यति छिटो गती संग, मानिसहरु धेरै अधीर भएका छन्। फास्ट फूड सजिलै संग ठीक भोजन मा उठाईन्छ किनकि मानिसहरु अब आफ्नो खाना को लागी पर्खन को लागी इच्छुक छैनन्। उही हामी अनलाइन पोष्ट के को लागी जान्छ। यदि यो धेरै शब्दयुक्त छ, विश्वास गर्नुहोस् कि मानिसहरु मात्र यो अतीत स्क्रोल हुनेछ। यो समाधान गर्न को लागी, एक इन्फोग्राफिक मा त्यो निबंध रूपान्तरण। विभिन्न तथ्या्क, डाटा, वा तुलना को रूप मा जानकारी को एक दृश्य प्रतिनिधित्व अधिक पाठकहरु द्वारा रमाईलो गरिन्छ, यस प्रकार एक इन्फोग्राफिक महत्वपूर्ण छ। ग्राफिक्स बनाउन को लागी, तपाइँ उपकरणहरु जस्तै ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ क्यानभा र कसरी इन्फोग्राफिक्स सिर्जना गर्न को लागी प्रेरणा पाउनुहोस् कि ध्यान मात्र कब्जा तर रूपान्तरण लाई बढावा दिनुहोस्।
हाँसो उत्तम औषधि हो
सबैलाई अब एक राम्रो हाँस्न को आवश्यकता छ र तब GIF एनिमेसन वा मेम्स अपलोड गर्नुहोस् जब तपाइँ सक्नुहुन्छ। तपाइँ यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको पोष्ट मा केहि हास्य प्रहार गर्न को लागी। अब, यो मात्र मान्छे हँसाउने बारे मा छैन; यो मानिसहरु लाई देखाउन को लागी हो कि तपाइँ पहुँच योग्य हुनुहुन्छ कि तपाइँ मा केहि हास्य छ। हास्यास्पद मान्छे सधैं सम्बन्धित गर्न को लागी सजिलो छ। तपाइँ आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि कसरी छिटो सेयर र रूपान्तरण एक पटक तपाइँ एक मेमे अपलोड गर्नुहुनेछ।
व्यक्तिलाई तपाईंको पोष्ट साझा गर्न को लागी सजिलो बनाउनुहोस्
सबैभन्दा सामान्य गल्तीहरू जुन प्रकाशकहरूले गर्छन भनेको सामग्री अपलोड गर्नु हो र मानिसहरूले शेयर बटन अवस्थित भएको पत्ता लगाउन अपेक्षा गर्नु हो। चाहे तपाईं एक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म वा एक वेबसाइट मा हुनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सामाजिक साझेदारी बटन दृश्यात्मक छ।
सन्देशहरूमा जवाफ दिदा द्रुत हुनुहोस्
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सन्देशहरु र टिप्पणीहरु लाई तुरुन्तै जवाफ दिनुहोस्। मानिसहरु लाई कम ध्यान स्पान छ र उनीहरु रुचि गुमाउँछन् जब कोही धेरै समय लिन्छन् उनीहरुका प्रश्नहरुको उत्तर दिन। सन्देशहरु लाई तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएर, तपाइँ छाप दिनुहुन्छ कि तपाइँ अनलाइन सक्रिय हुनुहुन्छ र तपाइँ कुनै पनि समय आफ्नो आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ पनी स्वतः जवाफहरु लाई सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरुलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाइँ उनीहरुको सन्देश देख्नुभयो र तपाइँ उनीहरुलाई पल उपलब्ध हुनुहुन्छ। त्यो अझै पनी "देखीएको" को तुलनामा राम्रो छ कि सन्देश बाकस मा चबूतरे हुन्छ किनकि यसले उनीहरुलाई महसुस गराउनेछ कि तपाइँ जानबूझेर उनीहरुलाई बेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ।
जहिले पनि दया देखाउनुहोस्
सोसल मिडिया खाताहरु को बारे मा सोच्नुहोस् कि तपाइँ अनुसरण गर्नुहुन्छ। तपाइँ उनीहरुलाई किन पछ्याउनुहुन्छ? सामाजिक मिडिया खाता को प्रकार हो कि तपाइँ लगातार बाट अपडेट प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। सधैं कुराकानी मा संलग्न, र ट्याग मानिसहरु कि तपाइँ बोली को कारण यो उनीहरुलाई लाग्छ कि तपाइँ मूल्य र उनीहरुलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। सामग्री निर्माण मा एक प्रीमियम राख्नुहोस्, र अरुलाई बढावा दिनुहोस् विशेष गरी यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तिनीहरुको काम केहि तपाइँको अनुयायीहरु लाई मनपर्नेछ। साझेदारी कथाहरु, अंतर्दृष्टि, जानकारी, चीजहरु कि तपाइँको अनुयायीहरु को लागी मूल्यवान हुनेछ संग उदार हुनुहोस्। जब तपाइँ अरुलाई बढावा दिन डराउनुहुन्न, तपाइँका अनुयायीहरूले यो महसुस गर्नेछन् र उनीहरुलाई तपाइँको पोस्टहरु लाई अझ धेरै साझा गर्न चाहान्छन्।
प्रकटीकरण: Martech Zoneको लागी सम्बद्ध लि्क क्यानभा यो लेख मा प्रयोग गरीन्छ।
टैग: शेयर बढावाबफरप्रतियोगिताहास्यतस्बिरहरूरूपान्तरण वृद्धिदयामार्केटिंग इन्फोग्राफिक्सपोष्ट फ्रिक्वेन्सीQ & A सत्रहरूप्रश्न र उत्तरबाढ्नुसामाजिक मिडिया छविहरूसामाजिक मिडिया प्रतिक्रियासामाजिक मिडिया साझेदारीसर्वेक्षण